Xildhibaan Mariam Arif Qassim
1. In qofka aabihiis/aabaheed Soomaali yahay;
2. In uu qofku yahay Somaali deggan dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya ama dibadda deggan laakiin diyaar u ah inuu jinsiyad kale oo uu horay u heystay ka tanaasulo.
1. Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waa mid, lamana kala qaybin karo, wuxuuna ka kooban yahay dhammaan muwaadiniinta;
2. Jinsiyadda Soomaaliyeed waa mid qur ah, sharci gaar ah oo ay soo saaraan Golaha Shacabka ee Dawladda Federaalka Soomaaliyeed ayaa xaddidaya sida lagu helayo, lagu laalayo ama lagu weynayo.
3. Qof leh jinsiyad Soomaaliyeed lagama qaadi karo, xattaa haddu qaato jinsiyad kale
4. Diidmada, laalista iyo ka qaadista jinsiyadda laguma xiri karo asbaabo siyaasadeed.